WR PUBG Hack 🥇 Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
WR PUBG mbanye anataghị ikike
Emekpala ọ bụla nke ọzọ mbanye anataghị ikike na enye ị nwere ike ịhụ na ịntanetị. GamePron nwere ihe kacha mma PUBG hacks ga - enyere gị aka imeri ọtụtụ egwuregwu ịchọrọ.
Nweta obere uto ihe ọ dị ka mmeri - --zụta Ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Egbula azụ ma mee ka ndị na-emegide gị nwee nrụgide ahụ - chazụta Ngwaahịa izu 1 taa!
Chọghị ichegbu onwe gị banyere ị ga-enweta GamePron? - Zụta Igodo Ngwa ahịa ọnwa 1!
Zụta igodo ngwaahịa taa ma nweta ohere ozugbo na PUBG WR cheat. Enweghị oge ichere - ị nwere ike ịbanye n'ime ya!
PUBG WR Hack Ozi
Emepụtara maka Windows 10, PUBG WR bụ ezigbo ihe ngwọta mbanye anataghị ikike maka onye ọ bụla nwere mmasị na Mpaghara Player Unknown. Enwere ọtụtụ aghụghọ ịhọrọ site na, mana ole na ole ga-ezute ụkpụrụ dị na GamePron. CPUs akwadoro maka aghụghọ a bụ Intel na AMD, ma ọ bụrụ na ekpochiri HWID, enyere gị ohere ịnweta HWID Spoofer. Ọ na-arụ ọrụ na ụdị PUBG ọ bụla ma bụrụ nke dabara adaba maka ndị ọrụ anyị niile na-egwu PUBG - yabụ oge ọzọ ị ga-egwu ma chọọ ịsọ asọmpi gị dị ka ụmụaka, nyere anyị PUBG WR mbanye anataghị ikike.
Imirikiti njirimara ị hụrụ n'anya na ngwaọrụ anyị ndị ọzọ ka dị ebe a. Nwere ike ịchọta atụmatụ Player / Item ESP gụnyere n'ime, yana Ama Ama. PUBG Aimbot nke na-abịa na ngwa a dị ọcha, ma ị nwedịrị ike iji Minimap / 2D Radar anyị.
Player ESP (Ọkpụkpụ)
Banyere PUBG WR
Anyị arụpụtala ngwa ọrụ a maka iji Windows 10 rụọ ọrụ, ọ ga-akwado Intel na AMD CPU. Ọ na-abịa naanị n'asụsụ Bekee, ọ nweghị nsogbu ọ bụrụ na ị na-emekpa iwu ngwaike, dịka
ngwá ọrụ a gụnyekwara spoofer HWID. Ọ bụ ihe akaebe iyi, yabụ ịnwere ike iji ya mgbe ị na-egwu egwu na ndị na-ekiri ya agaghị enwe ntụle! Nwere ike iji ọnọdụ PUBG WR banye ihuenyo zuru oke, yabụ na ị gaghị agba mgba ịhụ ihe na-eme na ihuenyo na ọnọdụ windo. O siri ike iji ma ọlị, ihe niile ị ga - eme bụ ịdebanye aha site na iji ihe nkwụnye ihe ma soro ntuziaka.
Kedu ihe kpatara iji PUBG WR karịa ndị ọrụ ndị ọzọ?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ ga-etinye onye ahịa ahụ ụzọ, dị ka anyị na-eme ebe a na GamePron? Ọ dị ka ọ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-anwa ịnata "aka" ha na mmanụ a honeyụ. Obi dị m ụtọ, ndị ọrụ amaraworị na enwere otu ebe (na otu ebe naanị!) Na ha nwere ike ịtụgharị maka PUBG aghụghọ. Imefu ego na ngwa ọrụ naanị ka ọ hapụ gị (na ụfọdụ, iwe gị) nwere ike izere. Ihe ị ga - eme bụ ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ndị a chọtara ebe a na GamePron na mbu.
Kellan HessOnye Ọrụ Oge Mbụ
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ PUBG a tụkwasịrị obi nke agaghị egbochi gị machibidoro gị, nyocha gị mechara gafee. Iji anyị na-game egwuregwu ga-enye gị ohere ezipụta gị mbanye anataghị ikike ntọala, na-enye ọrụ zuru ezu ịchịkwa otú ha chọrọ egwuregwu na-atụgharị. Can nwere ike ịme ka atụmatụ gị niile nwee ike ime ka ha ruo max, ma ọ bụ mbanye anataghị ikike na obere “finesse” ma gbalịa ịrata ndị na-emegide gị ka ha nwee echiche ụgha. Hazie gị hacking ahụmahụ na iso na na fun! Bụrụ onye otu GamePron taa ma ị ga-ahụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ ji egwu banyere ihe egwu anyị PUBG.
GamePron na-aga ilekwasị anya na ịhapụ ọghọm PUBG dị elu, yabụ gịnị ma ị sonyere ndị otu ahụ? Keyzụta igodo ngwaahịa taa ma hụ ihe kpatara ndị GamePron ji arụ ọrụ.
Njikere Na-achị na PUBG WR mbanye anataghị ikike?